5 MIPConD MACTARD STERED POWER ကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းရင်း5ချက်
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကြိုးပါဝါကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက် 5
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-27 မူလ:ဆိုက်ကို
ဒီနေ့ခေတ်မှာကြိုးမဲ့ပါဝါကိရိယာများစျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်များကြသည်။ အများအပြားလူထုနေရာတိုင်းရှိလူများနှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူပြီးသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူပြီး၎င်းကို0ယ်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင်စွန့်ပစ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါကြိုးပါဝါကိရိယာများ။ဒီဆောင်းပါးမှာကြိုးတွေကိုမထုတ်သင့်ဘူးလို့အကြောင်းပြချက်ငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မယ်။ ငါတို့ကိုအတူတကွသိအောင်လုပ်ကြပါစို့။
ငါတို့အများကြီးသိသည်Top Code လုပ်ပါဝါကိရိယာများစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်သည်အမြင့်ဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်စွမ်းတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းနိုင်ပြီး၎င်းတို့အား torque settings များရှိသည်။Fသို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်ကြိုးတပ်လေ့ကျင့်မှုများပိုမိုမြင့်မားသော top rotational အမြန်နှုန်းများရှိသည်။ ၎င်းသည်လေးလံသော applications များအတွက်အသုံးပြုစေနိုင်သည်။Tဟေးကိုလည်းသတ္တုထိုးဖောက်ဘီးများနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်းများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးထိရောက်သောရလဒ်များရရှိရန်သေးငယ်သောအရာများသည်အလှည့်အပြောင်းအမြန်နှုန်းပိုမိုလိုအပ်သည်။
2. ကြိုးကိရိယာများအနိုင်ရရှိခဲ့သည်’အာဏာကိုဖြတ်သည်အထိ t ကိုအလုပ်ရပ်တန့်။
သာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေး, ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောကြိုးကိရိယာများရှိပါတယ်ကြိုးခင်းလက်ဆီလက်ကြိုးသတ္တုကြေးနန်း စသည်တို့သည်အလုပ်၏အကျိုးစီးပွားကိုတိုးပွားစေပြီးလူများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်လူများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကြိုးမဲ့ကိရိယာများသည်လူများသည်အလုပ်အလယ်တွင်ရှိနေသောအခါသူတို့၏ဘက်ထရီများရပ်တန့်သွားလာမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
3. Ergonomic ပို
Thoughအလင်းကြိုးမဲ့စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများထိုကဲ့သို့သောကြိုးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့အလေးချိန်နှင့်ပုံသဏ္ in ာန်အတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်, သို့သော်အသုံးပြုသူသည်ပိုမိုလေးလံသောအခါ ပိုမို. မသက်မသာဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက်အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်အချိန်ယူပါလိမ့်မည်လျှောက်လွှာများ။ ဆန့်ကျင်တွင်,မိုးသည်းထန်စွာကြိုးပါဝါကိရိယာများရေရှည်ကန့်သတ်ချက်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
ကတည်းကMini ကြိုးမဲ့ပါဝါကိရိယာများဘက်ထရီများကိုအလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုပါ, ၎င်းသည်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပြ problem နာကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။So, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သမားများသည်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးမဲ့ကိရိယာများကိုအသုံးမပြုပါ။ သူတို့သည်အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလေးလံသော application များအတွက်ကြိုးကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။Wဦး ထုပ်သည်ရေရှည်မှမြင်တွေ့ရသည်။ ရေရှည်ကနေဘက်ထရီစွမ်းရည်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်တဖြည်းဖြည်းဘက်ထရီအသစ်များ packes အသစ်များကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်တိုးလာစေမည့်ဈေးကြီးသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း,Cord နှင့်ပါဝါကိရိယာများပိုပြီးစီးပွားရေးပုံရသည်။ ပြီးတော့စျေးနှုန်းမှာကြိုးမဲ့ကိရိယာများထက်စျေးနှုန်းချိုသာတယ်။Tသူကသာအားနည်းချက်ကကွဲပြားခြားနားသော bits နှင့်အတူကြိုးပါဝါကိရိယာများသိုလှောင်မှုနေရာအတော်များများယူပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ၎င်းတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည် Extension Wires ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အိမ်ပြင်တွင်အသုံးပြုသောအခါဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသူတို့အတွက်ကြီးမားသောစတိုးဆိုင်နေရာတစ်ခုရှာရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ မကြာခဏမသုံးသောလူအချို့အတွက်သူတို့သည်စတိုးဆိုင်များမှငှားနိုင်သည်။IN ဤနည်းဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်ကားဂိုဒေါင်၏နေရာကိုသိမ်းပိုက်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပါ။Of သင်တန်းအတွက်အလုပ်တတ်မေြာက်သူဤကိရိယာများကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသောအလုပ်သမားများသည်၎င်းတို့ကိုဂိုဒေါင်ထဲတွင်သိမ်းထားရန် သာ. ကောင်းသည်။
ကြိုးမဲ့ပါဝါကိရိယာများ ကြိုးပါဝါကိရိယာများ Top Code လုပ်ပါဝါကိရိယာများ ကြိုးလက် ကြိုးသတ္တုကြေးနန်း အလင်းကြိုးမဲ့စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများ မိုးသည်းထန်စွာကြိုးပါဝါကိရိယာများ ကွဲပြားခြားနားသော -bits နှင့်အတူကြိုးကိရိယာများ Cord နှင့်ပါဝါကိရိယာများ Mini ကြိုးမဲ့ပါဝါကိရိယာများ